Ilu na njikwa Ngwaahịa | Martech Zone
Ọ naghị abụkarị mgbe m na-elegara akụkụ Akwụkwọ Nsọ anya maka mkpali maka njikwa ngwaahịa na mmepe nke ngwanrọ, mana taa otu enyi zitere m ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ ndụmọdụ:
Onye n keepsdebe idọ-aka-ya abua di n'uzọ nke ndu;
Ilu 10: 17
Onye nāhu iru ihe n'anya n'anya nāhu ihe-ọmuma n'anya: Ma onye nākpọ iba-nba asì n'anya bu onye-nzuzu.
Ilu 12: 1
Ogbenye na ihere g will abiakwasi onye n disleda iba-nba anya: Ma onye nāhu iba-nba ama ka agāsọpuru.
Ilu 13: 18
Enweghị ike ikwu okwu ka mma. Mụtakwuo, na-emeghe, na-anabata nkatọ, ma mụta ihe site na mmejọ gị.
Tags: ndozintụziakaihe ọmụmanjikwa ngwaahịailu